May 23, 2019 - CeleLove
သရုပ်ဆောင် ဟာသမယ် ကစ်ကစ်ကွယ်လွန်….
May 23, 2019 Cele Love 0
သရုပ်ဆောင် ဟာသမယ် ကစ်ကစ်ကွယ်လွန်…. သရုပ်ဆောင် ကစ်ကစ် ဟာ ကျော က်ကပ်ဝေဒ နာ ကို အပြင်းထ န်ခံစားေ နရတာ လည်းဖြစ်ပါတ ယ် …..။ ယနေ့ ည ၁၀နာရီ ၅၀ မိနစ်မှာတော့ သူချစ်တဲ့ အနုပညာ နဲ့ ပရိသတ်တွေကို […]
ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင် မြန်မာ ညစ်ညမ်းကား ရိုက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ သရုပ်ဆောင် ဒါရိုက်တာ မင်းခန့်ကျော် …..
ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင် မြန်မာ ညစ်ညမ်းကား ရိုက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ သရုပ်ဆောင် ဒါရိုက်တာ မင်းခန့်ကျော် ….. ” မြန်မာနိုင်ငံမှာ ညစ်ညမ်းရိုက်လို့ရရင် ရိုက်ချင်တယ်လို့ပြောလာတဲ့ မင်းခန့်ကျော် ” တစ်ချိန်က ပရိသတ်တွေကို အကြိုက်တွေ့စေမယ့် အက်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ ဗီဒီယိုကားတွေများစွာကို အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး လက်ရှိအချိန်မှာလည်း ဒါရိုက်တာအလုပ်ကို လုပ်နေတဲ့ သရုပ်ဆောင် […]
အမှိုက်ကောက်တဲ့သူက စုထားတဲ့ ငွေတွေနဲ့ ဖုန်းဝယ်ဖို့ ဆိုင်အတွင်း ဝင်လာသောအခါ …..
အမှိုက်ကောက်တဲ့သူက စုထားတဲ့ ငွေတွေနဲ့ ဖုန်းဝယ်ဖို့ ဆိုင်အတွင်း ဝင်လာသောအခါ ….. အမှိုက် ကောက်တဲ့သူ ဖုန်းဝယ်ဖို့ ဆို င်အတွင်း ဝင်လာ သော အခါ … ဖြစ်သွားပြန်ပြီ ဒီဖြစ်ရပ်မျိုး လူကိုကြည့်ပြီး အထင်သေးတဲ့ လူတစ်ချို့ကြောင့် ဒီလိုဖြစ် ရပ်တွေ မကြာမကြာ […]
ပင်ပန်းလိုက်တာ သမီးရယ်… ဒါတောင် အပြုံက မပျက်ရှာဘူး …
ပင်ပန်းလိုက်တာ သမီးရယ်… ဒါတောင် အပြုံက မပျက်ရှာဘူး … နွေခေါင်ခေါင်နေပူကြီးထဲမှာ ဇရစ်ဖူးရောင်းပြီး ကျောင်းစားရိတ်ရှာနေရတဲ့ သမီးလေး ဒီနေ့ကျေးလက်က သမီငယ်တစ်ယောက် တောထဲကဇရစ်ဖူး ချိုးပြီးလိုက်ရောင်းနေတာတွေ့လို့ဝယ်ပြီးအားပေးလိုက်တယ်။စကားစပ်မိလို့သူ့ဘဝမေး ကြည့်လိုက်မှ … အာဂ ကလေးမှန်းသိလိုက်ရ တယ်။သူဒီနှစ် လေးတန်းေ အာင်လို့ ဟိုဘက်ရွာအ ထက်တန်း ကျောင်းသွားတ က်ရမှာတဲ့….ေ […]
ရွှေထူးကို ရိုက်ကွင်းမှာစတွေ့တဲ့နေ့တုန်းက ဒီကောင်တော့ စောက်ချိုးပြေပုံမရဖူးလို့ ထင်ခဲ့တဲ့ဖြိုးငွေစိုး (ရုပ်သံ)
ရွှေထူးကို ရိုက်ကွင်းမှာစတွေ့တဲ့နေ့တုန်းက ဒီကောင်တော့ စောက်ချိုးပြေပုံမရဖူးလို့ ထင်ခဲ့တဲ့ဖြိုးငွေစိုး (ရုပ်သံ) ဖြိုးငွေစိုးကတော့ ဟာသဇာတ်ရုပ်တွေမှာ ပရိသတ်ကို ရယ်မော်ပျော်ရွှင်စေတဲ့ ဟာသ မင်းသား တစ်ယောက်ဆိုတာ ပရိသတ်ကြီး သိမယ်ထင်ပါတယ်နော် ။ တခြားဇာတ်ရုပ် တွေ ထက် ပရိသတ်ကို အတင်းကြီးလုပ်ယူတာမျိုးမဟုတ်တဲ့ သဘာဝ ကျကျ သရုပ်ဆောင်မှု တွေနဲ့ရယ်မော်ပျော်ရွှင်စေတဲ့ […]
သင် (သို့) သင့်ချစ်သူ နှုတ်ခမ်း တစ်ဝိုက်မှာ” မှဲ့” ရှိခဲ့ရင် နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့” ပါတဲ့သူ အများစုဟာ သနားစရာ၊ ချစ်စရာ အလွန် ကောင်းကြပါတယ် …။ သူတို့တွေဟာ အပြင်ပန်းမှာ ခက်ထန် ကြမ်းတမ်းတယ် ထင်ရပေမယ့်အတွင်းစိတ် သဘောထားကတော့ အလွန် နူးညံ့ သိမ်မွေ့ပါတယ်? […]
ဝက်ခြံတွေ ပျောက်ကင်းပြီး ကျန်းမာလှပတဲ့အသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မယ့် (၁) မိနစ် နည်းလမ်း…
ဝက်ခြံတွေ ပျောက်ကင်းပြီး ကျန်းမာလှပတဲ့အသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မယ့် (၁) မိနစ် နည်းလမ်း… လှပပြီးကျန်းမာတဲ့ အသားအရေ၊ အထူးသဖြင့် ကျန်းမာလှပတဲ့ မျက်နှာအသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်ချင်တာ မိန်းကလေးတိုင်းရဲ့ အိပ်မက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ အကောင်းစား အလှကုန်တွေ၊ သဘာဝပစ္စည်းတွေအပြင် အရေပြားဆရာဝန်တွေဆီမှာ ကုသမှုခံယူပြီး အမြဲလိုလို ငွေကုန်ကြေးကျခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးခင်ကတော့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ […]
ဒီအခြေအနေ(၆)မျိုးနဲ့ကြုံနေရပြီဆိုရင် သင့်အနေနဲ့သေချာပေါက်ဆံပင်ပုံစံပြောင်းသင့်နေပါပြီ ပုံမှန်ဆံပင်ညှပ်တာက လူပုံစံအသစ်ဖြစ်သွားစေပြီး စိတ်သစ်လူသစ်ဖြစ်စေတဲ့အပြင် ဆံပင်သားအတွက်လည်း ကောင်းပါတယ်။ “မိန်းကလေးတစ်ယောက်က သူ့ဆံပင်ကိုညှပ်လိုက်တာဟာ ဆံပင်ညှပ်ရုံသက်သက်ပဲမဟုတ်ပါဘူး၊ ဘ၀အသစ်စလိုက်သလိုပဲ” လို့ Chanel Brand ကိုတည်ထောင်သူ Coco Chanel ကပြောခဲ့ပါတယ်။ ဆံပင်ပုံစံပြောင်းတာက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုတိုးစေပြီး စိတ်ကိုပျော်ရွှင်စေပါတယ်။ ဒါဆို ဘယ်လိုအချိန်တွေမှာ ဆံပင်ပုံစံပြောင်းဖို့အသင့်တောင်ဆုံးလဲဆိုတာ သိဖို့လိုလာပါတယ်။ […]
အမျိုးသမီး အများစုမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ သားအိမ်လုံးတည်ခြင်း ရောဂါ အကြောင်း …..
အမျိုးသမီး အများစုမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ သားအိမ်လုံးတည်ခြင်း ရောဂါ အကြောင်း ….. ဒါကတော့ အမျိုးသမီး အများစုမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ Uterine fibroid လို့ခေါ်တဲ့ သားအိမ်လုံးတည်ခြင်း ရောဂါ အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးပါ့မယ်နော် …။ Uterine ဆိုတာက သားအိမ်နဲ့ ဆိုင်သော၊ သားအိမ်နဲ့ ပတ်သက်သောဟု […]
သွားကိုက် ဝေဒနာကို (၅)မိနစ်အတွင်းသက်သာပျောက်ကင်းစေမယ့် ဆေးနည်းကောင်း
သွားကိုက် ဝေဒနာကို (၅)မိနစ်အတွင်းသက်သာပျောက်ကင်းစေမယ့် ဆေးနည်းကောင်း သွားကိုက် တာကို လူတော်တော်များများကြုံဖူးကြပါတယ်။သွားကိုက်တာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အသုံးဝင်တဲ့ ဆေးနည်းလေးကို မျှဝေပေးချင်ပါ တယ်။ကပ်စေးနှဲသီးများကို မီးဖြင့်ကျွမ်းအောင်လှော်၊ အမှုန့်ထောင်းပြီး ဖန်ပုလင်းထဲထည့်၊ ကိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ သွားကို ဆေးမှုန့်သိပ် ထည့်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သွားဘယ်လောက်ပဲ ကိုက်ကိုက် (၅) မိနစ်အတွင်း ပျောက်ကင်းသွားမည်ဟုဆရာကြီးရန်ရှင်း ကိုယ်တိုင် နက္ခတ္တရောင်ခြည် […]